TCDD Railway Nsoro na High Speed ​​Train (YHT) akara 2019 Map emelitere: Republic of Turkey State Railways (TCDD), na Regional Directorate nke Turkish State Railways na ụgbọ okporo ígwè e 2019-ụbọchị map na-egosi ókè-ala na rayhaber.com. Republic of Turkey [More ...]
Ebumnuche ụgbọ elu ụgbọ elu nke Ankara Istanbul: Mkpebi 9 na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Line dị ka Polatli, Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze na Pendik. Karagbọ okporo ígwè dị elu nke Ankara Istanbul, njedebe ikpeazụ na mpaghara obodo Pendik [More ...]
Oge Baskentray, Stations na Ahịa tiketi
Başkentray Ankara bụ otu n'ime ọrụ ndị nyere oke aka na njem ime obodo ya. Site na oru ngo nke a bụ ngụkọta nke 36 km, ntinye nke Ankara-Istanbul, Ankara, Sivas na Ankara, a na-arụ ọrụ Konya High Speed ​​Train na Ankara. N'agbata Ankara na Sincan [More ...]
Map nke Baku Metro
Ọ bụ usoro metro dị na Baku, isi obodo Azerbaijan. 6 mepere na November 1967. Ogologo ya bụ 36,7 km ma mejupụtara ahịrị nke 3 ma gụnye nkwụsị 25. Ọ bụ obodo mbu n'ime obodo ndị Alakụba. N'oge nke narị afọ, Baku abụghị naanị otu [More ...]
Zergbọ okporo Razọ Azerbaijan
Ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ okporo ụzọ obodo nke Azerbaijan. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 1991 n'aha okporo ụzọ Azerbaijan State (Azarbaycan Dovlət Dəmir) kama Soviet Railways. Ebe a dị n’ime Baku. Railgbọ okporo ígwè mbụ na Azerbaijan [More ...]
Turkey si lọjistik Centers
Lọjistik obodo nta ma ọ bụ ihe bụ Central, ihe bụ uru nke lọjistik emmepe, nke ụlọ ọrụ na-dị na logistic emmepe, Gịnị bụ ihe ndị kasị mkpa lọjistik emmepe na Europe, ihe bụ lọjistik park quality ibiere, guzobere na Turkey na Olee ebe ndị lọjistik emmepe ga-ike? [More ...]
Ankara Metro Okporo ígwè System Map na Ankaray: ọha iga ọrụ Ankara, isi obodo nke Turkey, nke Ankara Metropolitan Municipality General Directorate nke Ego okporo ígwè iga netwọk. Ankara rail transportation network na-eji maka okporo ụzọ okporo ígwè, metro, [More ...]
İzmir kacha mkpa ọrụ njem ọha na eze gụnyere na mmemme ego nke Buca Metro. Onye isi obodo nke İzmir Metropolitan Municipality Tunç Soyer kwuru na ha ga-amalite ọrụ iwu na-esote afọ na-achọ imeghe Buca Metro n'ime afọ ise. [More ...]
Map nke Buca Metro
Obodo İzmir Obodo ukwu, nke mere ka ndị isi gọọmentị na-arịọ maka ndị isi maka Buca Metro na ntinye ego, nke ga-eme ka okporo ụzọ nke İzmir gbasaa ruo n'ókè dị ukwuu, natara nkwenye ọ na-atụ anya n'aka Ankara. İzmir Mayor Tunç Soyer kwuru, için Maka ọrụ a ga-etinye na mmemme ego, [More ...]
Istanbul Metro Map: Istanbul Metro Map, nkọwa niile gosiri na map, pịa na map iji mee ka map nke Istanbul Metro gbasaa. Maapụ bụ maka ihe ọmụma na ndị nwe ha ga-akpọtụrụ ha. Istanbul ụzọ ụgbọ oloko [More ...]
Mmemme Metro Mgbe a ga-ahọpụta ndị isi oche ndị isi oche
N'agbanyeghi ihe ndi isi ochichi nke Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) choputara, 23 mere otutu nde votu na June. Dika nkwuchite anya nke onye isi oche SBE Sadi Guven, Ekrem, onye CHP na ndi otu ndi otu ndi otu ndi otu mba, [More ...]
Metana Metro M1 metro Ịgagharị, oge na-akwụsị M1 metro (Direction: Akincilar) gafere site na 13 kwụsị ruo mgbe ị ga - esi na Akincilar Station. Isi nke M1 metro lines n'izu na - abịa: 06: ịmalite ịrụ ọrụ na 00 [More ...]
Halkalı Gebze Marmaray Map Ulochi di iche iche na obodo di iche iche: obodo ndi Istanbul na-echere obi uto, Halkalı Emere njem mbụ na Gebze Marmaray akara maka 10 March. A na-enweta akara ahụ na kilomita 185 Gebze- Halkalı Ụzọ n'etiti [More ...]
Sistem System na Ogologo Istanbul nke Rail
Ihe ngwọta kachasị ngwa ngwa ma ọ bụ ihe bara uru nke njem ụgbọ njem bụ metro. Ọ na-enye njem dị ngwa, oge na njem dị ala n'etiti isi abụọ. Metro bụ ihe dị mkpa n'obodo ndị a. N'ọtụtụ mba ụwa mepere emepe afọ gara aga [More ...]
TCDD Railway Map: TCDD na-arụ ọrụ oge niile na mmeghari nke ahịrị ndị dị ugbu a yana mgbakwunye nke ahịrị ndị ọhụrụ. Karịsịa, teknụzụ ụgbọ mmiri ochie dị na usoro ọhụụ [More ...]
TCDD Railways Map: TCDD Map okporo ụzọ E nwere ugbu a na nnukwu mkpebi. Ịnwekwara ike ibudata map okporo ụzọ ugbu a na World Railway site na ebe nrụọrụ weebụ anyị. TCDD Railways Map: Ị nwere ike ibudata map okporo ụzọ TCDD site na njikọ ndị a: [More ...]
Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ, nke na-eme ka ndụ anyị dị ukwuu na njem ụgbọ njem, nọgide na-ejikọta obodo dị iche iche, ndị njem na ọdịbendị. Nnukwu nrara nye ụgbọ oloko dị elu na-eje ozi dị iche iche obodo nwere ụdị njem dị iche iche na ụdị ụgbọ ala [More ...]
Map Map nke Izmir
Izmir Tram Map: Izmir Metropolitan Municipality, emeghewo mba nile maka ntanetị nke 22 kilometer. Ihe kachasị mkpa dị nro bụ na ọ gụnyere ịzụta ụgbọ ala yana iwu. Egwu ... Egwu, Alakụba, dị ka azụmahịa zuru ụwa ọnụ nke Turkish na-eme nkwekọrịta [More ...]
Nakwa pịa Karsiyaka Tram Map. Akụkọ yiri ugbua na ozi ndị ọzọ nwere ike ịmasị na mpaghara Izmir Metropolitan obodo Tram Lines Ngalaba Ọhụụ Ọhụụ Ngwá Ọrụ Egwu nke Karsiyaka Tram Line 11 / 04 / 2012 Site na Izmir Metropolitan Municipality [More ...]
Map of Stations of Toilets na Istanbul Rail Systems
Mposi Stations map nke Istanbul Okporo ígwè System: Istanbul Okporo ígwè Systems mposi Stations Map bụ niile nkọwa gosiri na Istanbul Okporo ígwè Systems mposi Stations Map n'ihi na ibu version Pịa na map. A na-ezube map maka nzube nzube naanị. [More ...]
Istanbul Tram Lines Map: E gosipụtara nkọwa niile na Istanbul's Tram Lines Map ma pịa na map maka map buru ibu nke Istanbul's Tram Lines Map. Map ndị ahụ maka maka ihe ọmụma ma kpọọ ụlọ ọrụ dị mkpa maka ọnọdụ mbụ ha. [More ...]
Istanbul Rail Access Map: A na-egosipụta nkọwa niile na Istanbul Rail Access Map ma pịa na map maka mbipụta ka ukwuu nke Istanbul Rail Access Map. Maapụ bụ maka naanị ihe ọmụma [More ...]
Network Map Network nke Istanbul
Istanbul nke Okporo ígwè Network Map: Istanbul Okporo ígwè Network Map e gosiri na niile nkọwa, Istanbul Okporo ígwè Network Map 's Pịa na map maka ibu version. Maapụ bụ maka naanị ihe ọmụma [More ...]
TCDD njem ụgbọ njem
Shuttle TCDD Map: nkezi òkè nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè edoghi bụ banyere 2% ofụri njem ụgbọ njem ahịa na-eji yl Turkey 45 n'ọrụ. N'ihi nnukwu ụzọ na ogologo oge, ụzọ ụgbọ okporo ígwè sitere na ahịa njem ụgbọ njem [More ...]
Ọhụụ ọhụrụ metro na Istanbul mara ọkwa ruo 2019
A ga-ekwusara ọrụ ọhụrụ metro na Istanbul ruo mgbe 2019. N'okwu mmeghe nke Başakşehir Otogar Metro, Kadir Topbaş, Mayor nke Istanbul Metropolitan Municipality, na-eme atụmatụ iwu ụlọ ọhụrụ na [More ...]
Otogar-Bagcilar-Basaksehir-Olimpiyatkoy Ụzọ ụgbọ ala ụzọ ụgbọ oloko
Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Line Map, nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa njem usoro emejuputa na European n'akụkụ Otogar-Bağcılar-Başakşehir Line mepere Esenyurt-Kirazli akara ọrụ. Başakşehir Mayor Mevlüt Uysal, ndị Metro akara ga dochie kasị nke European n'akụkụ başakşehir-akara Kirazli [More ...]
Map Konya Railway
The Republic of Turkey State Railways TCDD, ma ọ bụ nanị inye iwu ụgbọ okporo ígwè iga na Republic of Turkey na-arụ ọrụ na-achịkwa ọchịchị. Ịnwere ike ibudata TCDD Railways Map maka Map Konya Railway site na njikọ ndị a. [More ...]